Nhau - Anti-hutachiona mwenje pasi bhachi chengetedza mhuri yako
Anti-hutachiona mwenje pasi bhachi chengetedza mhuri yako
Antimicrobial uye antiviral mwenje wakadzika bhachi: hutachiona idiki, yakapusa ine mhando imwe chete yeiyo nucleic acid (DNA kana RNA) iyo inofanirwa kugara mumasero anonamira uye kuwedzera nekudzokorora. Kunyangwe mavhairasi ari akapfava muchimiro uye mudiki muhukuru, ivo inogona kurwarisa vanhu nekudyara nekuvauraya. Pakati pemavirusi madiki eDNA, semuenzaniso, mamwe anokonzeresa gastroenteritis muvanhu nenguruve zvakare, nepo mamwe achidya nguva dzematoni uye kushaya kugona kudzora utachiona pachavo, asi nerubatsiro rweadenovirus, imwe hutachiona hwevabatsiri inopinza matoni.
Utachiona hunonyanya kubata vanhu furuwenza! Flu inouraya vanhu vanopfuura makumi masere neshanu pagore kuChina, Zvinopfuura makumi masere muzana vanhu vakura vanopfuura makore makumi matanhatu ekuberekwa.Mavhairasi eFluenza anotapurirwa kunyanya kuburikidza nemadonhwe emhepo, kusangana pakati pevanhu vanotapukirwa nevanhu vane hutachiona, kana kusangana nezvinhu zvakasvibiswa. Kazhinji kudonha mwaka wechando mwaka wepamusoro-chiitiko, unonyanya kukonzerwa nehutachiona hwefuruwenza hutachiona uye furuwenza B hutachiona .Mugadziri anoda kukuudza kuti chinangwa chekutanga chechigadzirwa ndechekuchengetedza hutano hwake uye hwemhuri yake.
Mucheka weanthibhakitiriya wave wakakura kwazvo mumusika, uye kuyedzwa uye kuyedzwa kweanti-hutachiona kwakapfava. Denda repamba rakamira zvishoma nezvishoma, asi pane fungidziro yechipiri, chigadzirwa ichi chine zvadzinoita pahutachiona hwefuruwenza. kune wese munhu, chigadzirwa ndechevabereki-mwana akateedzana, fashoni yakapusa.Ndinovimba nyika yese inogona kugara murunyararo uye kusununguka kubva kuchirwere nenjodzi
Iri jekete risingaremi rakakodzera zera rakasiyana siyana, uye rinogona kupfekwa nevana nevakuru. Inogona kupfekedzwa sembatya yemubereki-yemwana kana sevanhu vaviri kuita kuti mhuri yako ive inodziya uye yepedyo Kunyangwe iri yekufamba, mhuri, kana kuenda nguva dzose, bhachi repasi rinopa nyore kusingagumi.